Fora zaza faobe eto Toamasina
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly alarobia 23 jolay ny fankalazana ny faha 10 taona ny TSIAMBATRIAMBATRY, izay natao tao amin’ny EPP Manangareza. Tonga nanome voninahitra izany ireo manampahefana teto an-toerana sy ireo Ray amandReny ara-drazana. Zazalahy miisa 2105 no voafora sy zazavavy 164 no vita tevitsofina nandritry ny 9 taona nijoroan’ny fikambanana, araka izany nambaran’ny filoha mpanorina Rtoa VAVIROA Marcelline.
Mampiavaka manokana ity hetsika ity dia ny fanehona ny kolotsaina mampiavaka ny fomba betsimisaraka, ary nifasidianana manokana ny anarana ho teny Malagasy azo ampiasaina amin’ny firaisankiana, fifankatiavana, fifanampiana ka hahafahana mahazo vokatra ho an’ny rehetra. Isan’ny hetsika atao anatin’izany fikambanana izany ny fora zaza sy ny tevitsofina ho an’ny zazavavay ; eo ihany koa ireo hetsika ara-javakanto izay mitety toerana maro ato anatin’ny Toamasina I sy Toamasina II.
Raha ny fanazavana voaray dia vondron’olona samy nanana ny fahaiza-manaony no nitambatra niatombohan’ity TSIAMBATRIAMBATRY ity, tamin’ny taona 2004, ary tamin’ny tokatran’olona iray tsara sitrapo no nanaovana an’izany. Tsirikevitra niforona avy tamin’ny mpiaramiasa tamin’ny onjampeon’ny Radio Voanio ny TSIAMBATRIAMBATRY.
Zaza miisa 25 mahery no natao fora tamin’ny andro fanokafana ary mbola hitety fokontany maro eto Toamasina ity hetsika ity.
Fandaharam-potoana Tsiambatriambatry 2014:
Alatsinainy 21 jolay
: Fangatahan-tsodrano amin’ny tangalamena
Alarobia 23 jolay
: Fanokafana amin’ny fomba ofisialy ao amin’ny EPP Manangareza
Zoma 25 jolay
: ao amin’ny EPP Todivelo Raphael - Ankirihiry
Asabotsy 26 jolay
: ao amin’ny firaisana Morarano
Alahady 27 jolay
: ao amin’ny firaisana Tanambao V
Alatsinainy 28 jolay
: ao amin’ny Tanambao Verrerie
Alarobia 30 jolay
: ao amin’ny EPP Analamboanio
Zoma 1 agositra
: ao amin’ny Tsaratsiry Mangarano
Asabotsy 2 agositra
: Famaranana ny hetsika ao amin’ny EPP Todivelo Raphael - Ankirihiry
(64) Prud'Homme RAKOTOSON : 24-07-2014 - 08:30